'Humni addaa Amaaraa jiddu-gala Gondarii hinbahu' aanga'aa mootummaa - BBC News Afaan Oromoo
Naannoo Amaaraa Qimaantiitti walitti bu'iinsa deebii'ee kan eegale ALI Qaammee 3 bara 2011 akka ture jiraattoonni naannichaa BBC'tti himaniiru.
Yaada jiraatootaa kana kan cimsan miseensi kooree FalaBarbaadduu Eenyummaafi mirgi ofiin ofi bulchu Qimaanti yaa kabajamu Obbo Kafiyaalaw Mammoo gama isaanitiin, Qaammee 3 irraa eegalee naannichatti waraanni duuluusaa dubbatu.
Ittigaafatamaan Biiroo Nagaafi Tasgabbii Ummata Naannoo Amaaraa Obbo Aganyaw Tashaagar gama isaanitiin, humni addaa naannichaa seera kabachiisuuf naannichatti bobba'u BBCf mirkanneessaniiru.
Humni nageenyaa naannichaa Qaamee 3 irraa kaasee gandoota Qimaanti keessa imaluun manadara nageenyaa marsuun halleellaa irratti raawwachuu kan dubbatan Barsiisaa Makaashaan, humni nageenyaa kunis sababii halleellaa raawwateetiif shiftaatu naannichatti argama akka jedheen himu.
'Meedaaliyaan Riyoo yaadannoo wareegamtootaati'
Dhimmoota ajaa'ibaa Eeritiraa har'aa ibsan keessaa
Barsiisaa Makaashaan garuu naannicha shiftaan omtu akka hinjirreefi naannoo namoonni nagaa jiraatan humni nageenyaa rasaasaan reebusaanii dubbatu.
''Gochi kunis miseensoota koree gaaffii bulchiinsaa fi eenyummaa Qimaantii kan seeraan hundeeffame to'annoo jala olchuuf kan raawwatamedha,'' kan jedhan barsiisaa Makaashaan, ummanni koreewwan keenya hinxuqiinaa osoo jedhuu ''shiftaa qabuufiidha'' sababa jedhuun dhufaniiru jechuun haalicha ibsu.
Obbo Kafiyaalaw Maammoo gama isaanitiin bara 2012tti Fuulbaana 10 irraa kaasee humnootiin nageenyaa miidhaa qaqabsiisaa jiru jechuun himatu. Fuulbaana 11 gara mandaraa galuun dargaggoota irratti dhukaasa banuusaaniifi isaan booda ammoo qonnaan bultootarratti dhokaasuusaanii himu.
Wayita ammaa kanattis waraanni hedduun gara naannichaatti ergamaa jiraachu dubbatu.
Akka barsiisaa Makaashaatti, Fuulbaana 11 humnootiin nageenyaa irra deebiin gara naannichaa deemuun mandaricha sakkatta'usaanii, akkasumas midhaan qaqabe irra deemuun balleessaniiru jechuun himatu.
''Humnootiin nageenyaa midhaan miilaan dhituu eegallaan qonnaan bultoonni dhukaasa eegaluu'' kan dubbatan barsiisaa Makaashaan, ''miidhaa qaqabeen qabeenyi barbadaa'eera, namoonni qe'eefi naannosaanii irraa buqqa'aniiru'' jechuun himu.
Isaan boodas Fuulbaana 16 irraa kaasee walitti fufiinsaan halleellaa raawwataa akka jiran kan dubbatan jiraataan kun, haaluma kanaanis namni tokko bakka ceenchoo jedhamutti du'eera jedhaniiru.
Biiraan xaafii gabaarra oole
Akkasumas naannoo Magaalaa Ayikalittis namoonni ajjeefaman jiraachusaanii kan dubbatan jiraataan kun, Magaalaa Wanaattis namni ajeefameera walumaagalattis namoonni lakkoofsaan baayyee ta'an miidhaaf saaxilamaniiru jechuun hubachiisu.
Qondaalli motummaa Obbo Aganyoo Tashaagaru garuu gaaffiin eenyummaa Qimaanti haalaan deebii akka argatuuf naannichi murte dabarsuu isaa yaadachuun, ''humnootiin naannoo Amaraa keessatti nageenyi akka hinjiraanne barbaadan'' jedhaniin walitti bu'iinsa umameef itti gaafatamoodha jedhaniiru.
Humnootiin kunneen maqaadhaan eeramu baatan illeen, kaayypp walitti bu'insichaatii kan jedhan yoo ibsan, ''naannichatti tasgabbiin akka hinjiraannee, daandii gara Mattammaa geessu cufuu, kanaanis kan ka'e qonnaan butoonni Amaaraafi abbootiin qabeenyaa omisha isaanii akka walitti hinqabannee itti yaadamee kan raawwatameedha. Kunis gocha karoorafamee raawwatameedha'' jedhaniiru.
halleellaa naannichatti hidhattootaan qaqabeera jedhan yoo tarreessanis, ''namoonni nageenya osoo konkolaataan socho'aa jiranu dhaabsisuun eenyummaasaaniitiif ajjeesaniiru. Kana malees Konkolaachisaan Mini baasii ajjeefameera'' kan jedhan ittigaafatamaan kun, konkolaachiftoonni boottee boba'aa qabamusaaniifi bootteen gubbachuu himaniiru.
Walitti bu'insichi kan eegalees qaamoleen nageenyaa nama yakkaan shakkame tokko qabanii ganda tokko gara ganda biraatti osoo socho'anuu, dhukaasni saaqamusaatiin ta'uu kan dubbatan aanga'aan motummaa kun, haala kanaanis miseensi poolisii tokko ajjeefamu dubbataniiru.
Ittaansuun ammoo miseensoonni waraanaafi humna addaa miseensoota humnoota addaa aanaa Cilgaa ganda Concooqiitti argamaniif nyaata geessanii yoo osoo deebii'anuu dhukaasni akka itti baname himu.
Qaamoleen nageenyaa gara kaampii bulmaataatti yoo deebii'anis akka itti marsanii turan kan himan itti-gaafatamaan kun, tibba sanattis ''balleessa irra gahe'' irra of quluusaanii dubbatu.
Walitti bu'iinsa keessatti dhukaafni yoo saaqamu namni ajjeefamu danda'a kan jedhan itti gaafatamaa kun, garuu kan qabatanii ''duguggaatu nurratti raawwatamaa jira,'' jechuun dhara jedhu.
''Humnoota hidhattootaa, humnoota nageenyaa irraa kan du'aniifi madaa'an jiraachu kan himan ittigaafatamaan kun, seera kabachiisuuf sochooneera, seeras kabachisuun nurra jiraatas,'' jechuun tarkaanfiin fudhatan seera qabeessa ta'u himu.
Amma dhimmichi tasgabbaa'aa jira kan jedhan Obbo Aganyoon, humni addaafi waraanni magaala Ayikal keessa jiraachusaa eeruun, ''gaaffii tokkooffaan humni addaa naannichaa nu haa bahu'' kan jedhuudha. Irra deebii'een dubbadha humni addaa naannichaa hinbahu. Seera kabachiisuuf ni sochoona,'' jedhaniiru.
yeroo gabaabaa keessatti daandii cufaman saaqsiisuuf hojjataa jirra kan jedhan Obbo Aganyoon mokonninoota Ittisaa deegaruufis yaalii taasisa jirra jedhniiru.